Taksibe eto Antananarivo Zara raha hisy hiasa amin’ny herinandro…
Zara raha ny 15% amin’ny taksibe no niverina niasa nanomboka ny alarobia teo. Misy ny efa nisafidy hijanona satria maty antoka.
Manomboka amin’ny 5 maraina-1ora tolakandro dia 15 000Ar no azo, ary mbola hanalana ny solika hoentina milahatra any amin’ny famendrahana fanafody, hoy Atoa Rakotoniaina Jean Louis Filohan’ny Koperativa Tselatra sady Filoha lefitry ny UCTU. Amin’ny ankapobeny, dia tsy mazoto hiasa ny mpanao fitaterana noho ny fatiantoka kanefa io asa fandraharahana hitadiavana tombony. Manahy aho ary mifampiresaka amina lehibena koperativa sy tompona fiara fa mety zara raha hisy ny fiara hiasa amin’ny herinandro satria ny olona hoentina tsy misy firy, ny saran-dàlana tsy miova, ny fatiantoka be dia be, ny saofera sy resevera tsy maintsy karamaina, hoy io Filoha lefitry ny UCTU io. Tokony havela hiasa ara-dalàna amin’ny 5 ora maraina- 8 ora alina izahay satria amin’ny 9 ora alina ny “couvre-feu”, hoy izy.